Wararka Maanta: Talaado, Apr 30, 2013-Jawaari oo la kulmay ardayda Soomaaliyeed ee Wax-ka-barta dalka Turkiga Isagoo Su'aalo uga Jawaabay (SAWIRRO)
Kulankan oo ka dhacay hool ku yaalla magaalada Ankara ee xarunta Turkiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socda hay’adihii fududeeyay inay ardayda Soomaaliyeed wax-barsaho ka helaan dalka Turkiga.
Xoghayaha koowaad safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in ardayda Soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay Turkiga ay si aad ah uga faa’iideysanayaan fursadda ay haystaan.
Sidoo kale, Axmed C/raxmaan Jaakad oo ku hadlayay magaca Soomaalida ku nool dalka Turkiga ayaa sheegay in si aad ah ay ula dhacsan yihiin habka ay ku shaqeynayso xilligaan dowladda federaalka Soomaaliya; isagoo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda taageeraan.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo si rasmi ah u furay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay ardaydu u leeyihiin dalka; isagoo tusaale ahaa u soo qaatay in dagaalkii koowaad ee dunida in ardaydii wax ku baranayay London intii uu socday dagaalka laga saaray magaalada si ay waxbarashadooda u sii wataan oo uusan u saameyn dagaalka.
Furitaanka kaddib ayay ardaydu billaabeen inay su’aalo u weeydiiyaan Prof. Jawaari iyo wafdigiisa; waxaana su’aallaha ka mid ahaa qorshaha dowladda ee xilliga soo socda; gaar ahaan baarlamaanka sida qodobbada la xiriira dib u eegista dastuurka dalka, dejinta shuruucda federaalka, sameynta xeerarka maamul-goboleedyada; waxaana ardaydii su’aalaha soo jeediyay ay aad ugu ammaaneen guddoomiyaha iyo wafdigiisa sida uu uga qanciyay su’aalihii ay qabeen.
Prof. Jawaari ayaa mid-mid uga jawaabay dhammaan su’aalihii ay ardaydu weydiiyeen; isagoo ugu dambeyn ardayda ku dhiirrigeliyay inay dib u eegista lagu sameynayo dastuurka talooyin ku yeeshaan, sidoo kalena wuxuu ku boorriyay inay mar walba maanka ku hayaan inay halkan u joogaan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dalkooda, dadkooda iyo diintooda, isla markaana ay yihiin hoggaamiyeyaasha berri.
Xildhibaan Cabduqaadir Cosoble Cail oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya oo isaguna ka jawaabayay su’aal uu wafdiga soo hor-dhigay mid ka mid ah ardayda Soomaaliyeed dalka Siiriya wax ka baran jiray, balse ay saameeyeen dagaallada dalkaas ka socda ayaa ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay muhiimad siin doonto sidii ardayda waxbarashadoodu sameeyeen qul-qulatooyinka ka socda dalal ay Suuriya ka mid tahay ay ugu heli lahaayeen fursado waxbarasho; iyadoo fursadahaas laga siin doono dalalka xasilloon.
Ugu dambeyn, xildhibaanad Luul Cabdi Aadan oo ka mid ah guddiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka hadal ka jeedisay ayaa waxay wax aad iyo aad loogu farxo ku tilmaantay sida ay u dadaalayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Turkiga; waxaana ay Alle ka bariday inuu ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ka dulqaado.
Kulankan ayaa kusoo dhammaaday jawi wanaagsan iyadoo kulanka uu qeyb ka noqonayo kulammo la tashi ah oo uu guddoomiyaha baarlamaanka horay ula yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka dibaddiisa.